ဒီပုံတွေကို ပရိုဖစ်ရှင်နယ် ဓာတ်ပုံပညာရှင် " ဂရိတ် ဟိုးဝါတ်" ( Grete Howard ) မှကျေးဇူးပြုပါတယ်။ အသက် ၅၀ အရွယ် နော်ဝေး ဇာတိ ဂရိတ်ဟိုးဝါတ် ဟာ အင်္ဂလန် သားနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး အင်္ဂလန်မှာနေပါတယ်။ သူမအကြောင်း အပြည့်အစုံကို အောက်ကပေးထားတဲ့ website address မှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မသက်ဇင် June 10, 2009
sources, including Tibetan translations of Dharmakayavidhi and Madhyamaka Ratnapradipa, Taranatha's history and Pag-Sam-Jon-Zang, mention that Dharmapala's successor Devapala (circa 810—850) built it after his conquest of Varendra. The Paharpur pillar inscription bears the mention of 5th regnal year of Devapala's successor Mahendrapala (circa 850—854) along with the name of Bhiksu Ajayagarbha. Taranatha's Pag Sam Jon Zang records that the monastery was repaired and renovated during the reign of Mahipala (circa 995—1043 AD).
vanrman rulers of vanga(varman)ဆိုသည်မှာ ဝြမန် ၊ဝရမန်၊ဗြမန်၊ဗရမန်
ဲဗြဟ္မဏ် ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူအယူသီးဗြဟ္မဏမျိုးနွယ်ဝင်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ၏ဘုရင်မှာ
vanga(ဝင်္ဂ) ဗံဂ၊ဗန်ဂ၊ ဖြစ်သည်၊၎င်းဗန်ဂမှသည်ဗင်္ဂလားဖြစ်လာသည်။၎င်း
ဗင်္ဂ(ဝင်္ဂ)ဘုရင်သည်ဟိန္ဒူအယူသီးဇာတ်ကြီးဝါဒီဖြစ်ပြီး somapura mahavihara(သောမပူရမဟာဝိဟာရ)အားဖျက်ဆီးမီးရှို့ သူဖြစ်ပြီး vipulashrimitra(ဝိပူလသိရီိမေတ္တယျထေရ်)အားမီးလောင်တိုက်သွင်းကာ
အထားများကိုအထက်၌ဖေါ်ပြထားသော banglapeadia somapura mahavihara နှင့် somapura mahavihara wikipeadia တို့ မှကောက်နုတ်
လေ့လာခွင့် ရတဲ့အတွက် ကျေဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်.....
thanks for the value notes